Apple Manakarama mpanao gazety Alex Gale hitarika ny ekipa Apple, Beats 1 ary iTunes Editorial Team | Avy amin'ny mac aho
Serivisy mozika streaming an'i Apple, Apple Music dia nanakarama mpanao gazety Alex Gale ho tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny ekipa famoahana an'ity sehatra mozika streaming ity ankoatra ireo sehatra hafa, toy ny station Beats 1 sy iTunes. Gale hanomboka hiasa ao amin'ny biraon'ny Apple ny alatsinainy ho avy izao.
Alex Gale dia niasa tao amin'ny magazine Billboard, Complex, Vibe ary XXL teo aloha, araka ny filazan'ny Variety, izay namoaka ny vaovao. Gates dia hiasa eo ambany fitarihan'i Jen Robbins, talen'ny tetik'asa sy ny laharan'ny famoahana ny orinasa.
Ny asan'i Alex Gale dia ny fanaraha-maso ny atiny rehetra voasoratra ho an'ny sehatry ny mozika an'ny Apple ao anatin'izany ny Beats 1 sy iTunes. Araka ny Variety, koa hiandraikitra ny tetik'asa mifandraika amin'ny sehatra video vaovao izay i Apple no miasa tato ho ato ary izay manolotra lohateny lehibe ho antsika.
Ny alahady lasa teo dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny The Wall Street Journal i Apple fa io sehatra io manana mpanjifa 36 tapitrisa. Araka ny nampahafantarinay anao omaly, hoy ity gazety ity, Apple Music dia mety mihoatra ny isan'ny mpanjifa Spotify any Etazonia mandritra ity taona ity, raha mitohy ny fitomboan'ny sehatra ankehitriny.
Amin'izao fotoana izao, Apple Music dia mitombo amin'ny taha 5% isam-bolana, raha toa ka mitombo hatrany amin'ny 2% ny tahan'ny streaming mozika soedoà, Spotify. Tokony ho tsaroana fa amin'izao fotoana izao, Spotify dia manana mpanjifa mandoa 70 tapitrisa ary ny fitomboany hatramin'ny nanombohany ny serivisy fampandehanana mozika an'i Apple dia nitombo be dia be, lasa fanerena fa tsy nanjary lozisialy mozika safidin'ny ankamaroan'ny mpampiasa fitiavana mozika ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple dia manakarama mpanao gazety Alex Gale hitarika ny ekipa mpanonta Apple, Beats 1 ary iTunes